Tantara: Manangana ny Maty i Jesosy - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
Rehefa nahita an’i Jesosy i Jairo, dia nisy vahoaka betsaka nanodidina azy. Nefa namakivaky teo amin’ny vahoaka i Jairo ary nianjera teo an-tongotr’i Jesosy. ‘Marary mafy dia mafy ny zanako vavy’, hoy izy. ‘Mba tongava re manasitrana azy’, hoy ny ﬁtalahoany. Nilaza i Jesosy fa ho avy izy.
Raha teny am-pandehanana izy ireo, dia nifanety nanakaiky azy ny vahoaka. Nijanona tampoka i Jesosy. ‘Iza no nikasika ahy?’, hoy ny fanontaniany. Tsapan’i Jesosy fa nisy hery nivoaka avy taminy, koa fantany fa nisy olona nikasika azy. Iza anefa? Izany dia vehivavy iray izay narary be nandritra ny 12 taona. Tonga teo izy mba hikasika ny ﬁtaﬁan’i Jesosy, ary sitrana!
Nentin’i Jesosy avy eo ny ray aman-drenin-drazazavavy sy telo tamin’ny apostoliny ho any amin’ny eﬁtrano nandrian’ilay zaza. Noraisiny tamin’ny tanany ilay zazavavy ary hoy izy: ‘Miarena!’ Dia velona indray izy, araka izay hitanao eto. Ary niarina izy ka nandehandeha! Izany no antony maha-faly dia faly aoka izany ny rainy sy ny reniny.
Tsy io no olona voalohany natsangan’i Jesosy tamin’ny maty. Ny voalohany resahin’ny Baiboly dia ny zanakalahin’ny mpitondratena iray nonina tao amin’ny tanànan’i Naina. Tatỳ aoriana, i Jesosy dia nanangana koa an’i Lazarosy, anadahin’i Maria sy Marta, tamin’ny maty. Rehefa hanapaka amin’ny maha mpanjakan’Andriamanitra i Jesosy, dia hamerina indray ho amin’ny ﬁainana, olona maro dia maro efa maty. Tsy ho azontsika atao ve ny ho faly ny amin’izany?
Nentin’i Jesosy tao amin’ny eﬁtra nisy ilay zazavavy ny ray aman-dreniny sy ny apostoly telo. Inona no nataon’i Jesosy taorian’izay?
Ahoana no nampisehoan’i Jesosy, fa ara-dalàna ny mitomany rehefa misy havan-tiana maty? (Jaona 11:33-36, 38; 2 Sam. 18:33; 19:1-4)